Soo saaraha iyo Warshada ugu Wanaagsan ee palette |Huaruide
1. Mashiinka jiidashada magnet synchronous joogtada ah ee aan gearless, wiishku wuxuu u shaqeeyaa si hufan, wuxuuna xaqiijin karaa badbaadinta tamarta.
2. Qiyaastii 100 palette ayaa gudaha iyo dibaddaba lagu rari karaa iyadoo la raacayo goobta xamuulka taasoo kor iyo hoos loogu qaadi karo xawaare sare.
3. Habka gaadiid-qaadayaasha lagu dhex dhisay waxa uu garwaaqsadaa isbeddelka xasiloon ee u dhexeeya hooyada iyo dhallaanka iyo gaadiidleyda dhulka.
4. Wareeggu wuxuu ku rari karaa baallaha iyadoo la adeegsanayo rullaluistemadka, silsiladda ama isku darka labada shay ee makaanaysan.Doorashadu waxay ku xirnaan doontaa nooca palette ee la raray;Gaadhi-qaaduhu wuxuu hagaajiyay palette kasta oo cabbir ah.
5. Waxay si fiican uga shaqeysaa bakhaar la qaboojiyey, kuwa aan qarxin, amniga iyo deegaan kale oo gaar ah.
Maalmahan, dhismaha xarun wax-soo-saar oo badan iyo wax-soo-saar ayaa ka soo baxay qaabkii hore ee "load flat load" oo loo beddelay kaydinta lakabyo badan iyo heer sare ah, si loo mideeyo kheyraadka si waxtar leh oo loo fuliyo maamul isku dhafan.
HUARUIDE wiish toosan waxay qabataa qaab dhismeedka caadiga ah iyo qaybaha korantada ee summada hore ee qaybaha muhiimka ah.Cutubka waxqabadka sare ee moodeelka ah wuxuu taageeraa isu-ururinta degdega ah iyo dayactirka, kaas oo ku habboon qaabaynta nidaamka dabacsan.Inta badan xaaladaha, wiishkayaga waxaa si toos ah u maamula WMS.Looma baahna wax dalab ah oo ka yimaada hawlwadeen.Laakiin waxaan sidoo kale bixinaa ikhtiyaar si aan gacanta ugu qaadno wiishka.
Maya Magaca Unug Halbeegga Odhaah
1 Balaadhka Guud mm 1700 Balaadhka saabka <1300mm
2 Dhererka Guud mm 2920 Dhererka saabka <1300mm
3 Dhererka Wariyaha Silsiladda mm 1480kii
4 Xawaaraha Wareejinta Silsiladda m/s 0.2
5 Max.Xawaaraha qaadista m/s 1
6 Qaylada Qaliinka dB(A) 70
7 Korontada Matoorka Kw 0.4-0.75
8 Kor u qaadida Awooda Matoorka Kw 6.3-9.5 Soo jiidashada birlabeedka joogtada ah
9 Habka Qaadista Xarig-jiidista fiilada, dheellitirka counter
10 Hagidda Platform Kor u qaadida T90 tareenada hagaha u go'ay ee qaadista
Hore: Istaker Crane
Xiga: Rack Mobile